Laporta Oo Go'an Ka Gaaray Hadii Pique Uu Ciyaarayo Xili Ciyaareedka Danbe
HomeWararka CiyaarahaLaporta oo go’an ka gaaray hadii Pique uu ciyaarayo xili ciyaareedka danbe
Laporta oo go’an ka gaaray hadii Pique uu ciyaarayo xili ciyaareedka danbe
June 17, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Madaxwaynaha Barcelona Joan Laporta ayaa ku adkaysanaya in Gerard Pique uu haysto taageero buuxda.
Waxaa jira hadal heyn ku saabsan in Laporta uu Pique ka codsanayo inuu ka tago kooxda sababo dhoor ah iyo xaalado jiro.
Laakin kulanka kooxda Laporta ayaa yiri: “Piqué waa uu dhibtoonayaa, sida aan qiyaaseyno, waxaan ku haynaa male-awaalkeena ciyaartoy caan ah, lacag iyo wax walba oo aan jecelnahay, laakiin, Piqué waa shaqsi weyn, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. kabtanka, waa nasiib badan yahay, wax badanna wuu na siiyay, wax badanna waa uu na siinaa.
“Wuxuu doortay inuu sii ahaado xirfadle kubbadda cagta, waxa uu lahaa laba wajib oo ah inuu yahay ganacsade ama kubbadda cagta, wuxuuna doortay ciyaartoyga kubbadda cagta, wuxuuna soo maray xaalad aan haba yaraatee ku farxin, isagoo carruur ku haysta da’ aad u yar iyo Piqué wuxuu u qalmaa qaddarinta iyo jacaylka Culés, ha u fiirsan wararka isku dayaya inuu u ekaado nin aan caqli-gal ahayn, oo aan dareen lahayn oo aan dan ka lahayn wax kasta.
“Nasiib ayaan ku leeyahay inaan aqaano oo aan ula dhaqmay sidii qof ahaan, waa qof aan caadi ahayn oo dhibban, waana inaan caawinaa isaga, waxaan noqon doonaa qofka ugu horreeya ee siiya jacaylka uu u qalmo.”